बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ – Gaule Media ::
Home/रोचक/बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ
ramsharan२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:१५
छिट्टै उर्जा प्रदान गर्ने फलको रुपमा चिनिने केराले तपाईलाई स्वस्थ्य मात्रै राख्दैन, केही जटिल प्रकारका रोगबाट पनि बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केराले तपाईको शरीरलाई धेरै प्रकारका रोगबाट बचाउँछ । पूर्ण रुपमा पाकेको केराको बोक्रामा केही काला दाग देखिन्छन् ।
अर्धौ झाझरमारे एक ऐतिहासिक पृष्ठभुमी
२३ असार २०७८, बुधबार ०७:०८
प्रेमिकाको प्रशंसामा १ सय ४४ शब्द लेख्न अदालतको आदेश
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०१:४५